Oromo News 03.16.2021 | KWIT
Kuni Kanaan osoo jiru, Northeast Nebraska Public Health Department yeroo jalqabaaf virus kun akka mulatte himan. Health department akka jedhaniti Counties kan akka Cedar, Dixon, Wayne, fi Thurston keessati kan mulatteedha.
Virus haaroyni kunis saffisaan kan dadarbuu fi miidha baaye fiduu akka dandau himan.
Kuni kanumaan osoo jiru, mana fayyaa Siouxland akka gabaasetti jiraattota Woodbury County dhaaf clinica haarawa sadii kan talaali itti kennamu Tyson keessati akka baname himan. Kunis kan jalqabu March 25th, 29th, fi 30th kan tau yoo tau nama umriin isaani 16 fi sanii oltae hundaafu CDC dhaan kan kennamuudha. Beellamu qabachuu kan dandaumus guyyaa kamsaa seati 3 pm Website health deparmanti siouxlanddistricthealth.org irratti fi bilbilaan ammo 712-234-3922 irrati akka beelama qabachuu dandeettan himan.
Guyyaa har’a, deparmantiin mana fayyaa Iowa website issaa akka mullisutti jiraattoni Iowa 413,000 kan ta’an talaali fudhachuudhan Covid-19 ufirraa dandamatani jiran. Namni haarawa due nama tokko yoo tau kan haarawa qabame ammo 400 dha.
South Dakota board akka jedhetti jia dhuftu kannniin keessa public University jaha ta’an akkuma qaraatti mana barumsaati qaaman kan deebian akka ta’an himan. Director bordi executive akka jedhetti murti kana kan murteesse talaali corona virus kan argame kan irrati hundae akka tae himan. Kunis University South Dakota kan Vermillion keessa kan dabalatu ta’a.